Sharciga Waxbarashada iyo xuquuqda | USAHello | USAHello
Ma og tahay sharciga waxbarashada carruurta iyo xuquuqda waxbarashada ee USA? Sharciga Waxbarashada ayaa sheegay in qof walba xaq u leeyahay inuu waxbarasho lacag la'aan ah. Ardayda waxay xaq u leeyihiin in ay xirtaan xijaabka iyo inuu ku tukado,. Waxaad xaq u leedahay inaad turjubaan marka aad la hadal dugsiga carruurta. Baro oo ku saabsan xuquuqda waxbarashada.
Xaqa aad u leedahay in ay tagaan dugsiga
In gobolka kasta ee USA, carruurta ay xaq u leeyihiin waxbarashada. Uma baahnid in aad in uu noqdo muwaadin ah ama si sharci ah waddanka u soo guurey. Dhab ahaan, Sharciga waxbarashada ee gobolka kasta oo ayaa sheegay in dhammaan carruurta waa in tag dugsiga tiro cayiman oo sano.
carruurta da'da waa in dugsiga u bilaabo waa inta u dhaxaysa 5 iyo 8 sano jir ah taas oo ku xidhan gobolka. Waa in ay sii joogaan iskuulka ilaa ay 16, 17, ama 18 sano jir ah, sidoo kale iyada oo ku xidhan gobolka ay ku nool yihiin.
Bulsho waliba waxay dugsiyada dadweynaha Sanooyin in ay yihiin lacag la'aan ah oo dhan, sida caadiga ah laga bilaabo da'da 5 sano jir ah, laakiin in dalalka qaar ka mid ah waa 4 ama 6 sano jir ah.
Caruurta USA waa in joogo dugsiga illaa ay ugu yaraan yihiin 16, laakiin waxay leeyihiin a xaq u inay joogaan dugsi dheer. Haddii ardayda ma ayaa diyaar u ah si ay u qalin dugsiga sare ee 18, waxay xaq u leedahay in ay sii joogaan ama qori ilaa ay ugu yaraan yihiin leeyihiin 20 ama 21 sano jir ah. In a dalalka yar, waxaa jira xad da'da no. Waad awoodaa akhriyin Ingiriisi iyo Isbaanish ah oo ku saabsan ardayda waddanka u soo guurey’ xuquuqda in ay dhigtaan dugsiga ee USA. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in arki bilaabo dugsiga iyo weligiis iyo xadka da'da ee gobolka.
Nasiib darro, ardayda waaweyn qaar ka mid ah ayaa lagu diidi karo xaqa ah inuu sii joogo ama qorto dugsiga. Waxay ayaa loo sheegay in ay u baahan yihiin si ay u tagaan fasalada waxbarashada dadka waaweyn si aad u hesho shahaadada dugsiga sare.
Haddii aadan haysan in ay helaan dugsi sare, waxaad ku baran kartaa online for GED a®, HiSET ama TASC shahaadada la our GED online lacag la'aan ah® fasalka diyaarinta. GED The®, shahaadooyinka HiSET iyo TASC waa halkii shahaadooyinka dugsiga sare. Waxay muujiyaan kuliyadaha iyo shaqo in aad leedahay aqoon la mid ah sida qof ah oo ka qalin jabiyay dugsiga sare ee USA.
Sharciga Waxbarashada iyo xuquuqda Mareykanka Muslim
Qaar ka mid ah ardayda American Muslim midabtakoor dugsiga. Haddii aad tahay Muslim, in aad ogaato xuquuqda aad leedahay. Tusaale ahaan, waxaad xaq u leedahay in ay xirtaan xijaabka aad ama kufi dugsiga dadweynaha, xataa haddii uu jiro xeerka labiska a. Waxaa laguu oggol yahay inuu ku tukado,, oo aad ka maqnaan karaa dugsiga ciidaha diiniga ah.
CAIR: Ogow xuquuqdaada dugsiga dhallinyarada Muslim
CAIR bara Muslimiinta American ah oo ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka ay sida muwaadiniinta oo ka caawisaa iyaga ka qayb dhammaan dhinacyada nolosha bulshada qaado. Macluumaadka on this page sharaxayaa dhallinyarada Muslim Americans waxa xuquuqdooda yihiin dugsiga.
Note: button download bogga CAIR ah uma shaqeeyo. Laakiin aad awoodid download guide jeebka ka our website-ka si loo badbaadiyo ama print.
Sharciga Waxbarashada iyo xuquuqda dadka cusub
The ACLU ayaa sheegay in, “Waa shaqada oo ka mid ah dugsiyada dadweynaha inaan idin baro in ay ku hadlaan Ingiriisi iyo si ay kuu siiyaan waxbarasho wanaagsan maadooyinka kale inta aad wax baraneyso. Ardayda aan ku hadlin Ingiriisiga waxay xaq u leeyihiin in ay u baahan yihiin dugsiga degmada si ay u siiyaan waxbarashada labada luqadood ama barashada luqadda Ingiriisiga ama labadaba.”
US Departments of Justice iyo Waxbarashada:
Macluumaad ku saabsan xuquuqda dugsiga aan Ingiriisiga ku hadlin
macluumaadka dawlada waxaa loogu talagalay waalidiinta, ardayda, iyo dugsiyada oo u baahan in ay fahmaan xuquuqda qoysaska aan ku hadlin, dhagaysan, akhri, ama wax ka qoraan Ingiriisi sida afkooda hooyo.
Macluumaadkan waxaa ku qoran luqado badan. Marka aad doorato in aad afka ka hooseeya, link furi doonaa furmo kale. Waxay yihiin waraaqaha pdf, si aad iyaga kala soo bixi kartaa in ay sii ama print:
Baro GED ah®, imtixaanada HiSET iyo TASC